Fil d'actualités du 17/03/2018
17/03/2018 - 10:00 : 17 MARTSA 2009-17 MARTSA 2018: 9 taona katroka anio ny namindran'i Marc Ravalomanana fahefana tamin'ny tafika rehefa nihamafy ny tsindry tamin'ny fanonganam-panjakana .
17/03/2018 - 09:00 : DIPLOMASIA: Voatendry ho Ambasadaoron'i Madagasikara any Suisse i Véronique Resaka, izay efa nitana toerana ambony teo anivon'ny Masoivoho Malagasy tany Frantsa.
17/03/2018 - 08:30 : MINISITERAN'NY FAHASALAMANA: Tomponandraikitra ambony miisa 5 nesorina nandritra ny filankevitry ny minisitra.
17/03/2018 - 08:00 : ELIAKIM: Tany amin'ny faritra Maroantsetra sy Mandritsara ny foibeny tamin'ny 2ora maraina. Mitondra rivotra 85km/ora arahina tafiotra 140km/ora, mikisaka miakandrefana 8km/ora.
16/03/2018 - 16:30 : RIVODOZA ELIAKIM: Somary nijanona ao MASOALA (Distrika Antalaha) izy tamin'ny 4ora teo. Mbola FORTE Tempête Tropicale hatrany izy miaraka amin'ny rivotra manodidina ny 100km/h sy tafiotra 145km/h. Nihena ho 7km/h eo ny fandehany. Hanomboka hanavatsava eo anelanelan'ny faritra Analanjirofo sy Alaotra Mangoro izy anio alina sy rahampitso Sabotsy ary hiverina hivoaka an-dranomasina eo anelanelan'i faritra Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany alahady any.
16/03/2018 - 16:00 : AKON'NY RIVODOZA ELIAKIM: Olona iray maty any Nosy Be Hell Ville, ary iray maratra mafy. Tsy latsaky ny 30 ny trano rava, ary an-jatony ny traboina.
16/03/2018 - 15:30 : MARAIS MASAY: Maty voatifitry ny polisy eny an-toerana ny roa tafatsoaka ny fonjan'i Tsiafahy antsoina hoe Tanteraka sy David Rolland.
16/03/2018 - 14:30 : CHAMPION'S LEAGUE - ANTSAPAKA AMIN'NY 1/4-DALANA: FC BARCELONE - AS ROME; FC SÈVILLE - BAYERN MUNICH; JUVENTUS - REAL MADRID; LIVERPOOL - MANCHESTER CITY.
16/03/2018 - 14:00 : POLISIM-PIRENENA: "Lehilahy iray antsoina hoe Patrick na i “PETIT”, 28 taona no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny boriboritany faha-4 etsy ISOTRY raha avy nanendaka renim-pianakaviana iray teny amin’ny CNAPS Ampefiloha ary nitsoaka tamin’ny “moto scooter” ka nihazo ny CENAM iny ny Alakamisy, 15 martsa 2018 teo tokony ho tamin’ny 10 ora maraina".
16/03/2018 - 13:30 : ANDEKALEKA MORAMANGA: Vehivavy iray antsoina hoe Nandroanina no maty amin'izao fotoana izao, ary tsy fantatra izay fianakaviany. Voalaza fa avy any Mahitsy izy io.
Archive du 20170923
Hikatso ny fitsarana Hitokona ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha
Nampitovy tadin-dokanga omaly ny sendikan’ny mpitsara sy mpiraki-draharahan’ny fitsarana ary nanao fanambarana iombonana teny Anosy fa hiroso amin’ny fitokonana faobe tsy misy fetrany manomboka amin’ny alarobia 27 septambra ho avy izao.
Fifidianana amin’ny 2018 Mandindona ny tsy fangaraharana
Toy izay fanazavana nentin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany no fanazavan’ny filohan’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara,
Hery Rajaonarimampiana tany New York Nampandry adrisa sy niaro tena
Voninahitra ho an’i Madagasikara ny nahalany azy ho filoha lefitra nitantana ny fihaonana lazaina ho mariky ny fahatokisana eo anivon’ny sehatra iraisampirenena tahaka ny fandraisana anjara mavitrika tamin’ireo fihaonana samihafa nitranga tao amin’ny foiben’ny fikambanan’ny
Vondrona SADC Tsy politika fotsiny fa ekonomika koa
Nifarana omaly ny loabary an-dasy nasionaly nandritry ny 2 andro momba ny drafitra lasitra stratejika ho fampandrosoana ny vondrom-paritra Sadc izay natao tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy niaraka tamin’ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena Rohy.
Taratasin’i Jean Aza manaiky atao fitaovana !
Miarahaba Jean a ! Ianareo ve dia tsy mba tonga saina hoe maninona ireo namanareo hafa no niala an-daharana amin’io tolona ataonareo io fa ianareo irery sisa no najanony eo ee?
Lalao Ravalomanana Olon’ny Fifanakalozana
Manoloana ny fanararaotan’ny sasany ny fahanginan’ny ben’ny tanàna tato ho ato, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny iraka eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, Sarah Zoe,
«Grille indiciaire unique» Tokony hampiharina amin’ny PSE
Tsy hitondra vokatsoa hoan’ny zaza sy tanora Malagasy ny fanapahan-kevitra mandeha ila noraisin’ny fanjakana hampihatra ny PSE (Plan Sectoriel de l’Education),
Mamy Rabetokotany « Mitovy ny sazy ho an’ireo tsy fanajana zon’olombelona rehetra »
Iraka fototra miaraka amin’ny andraikitra sahanin’ny Cnidh (Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme) ny miaro sy mampahafantatra ny zon’olombelona.
Jean Nirina – Filohan’ny HAFARI Nivoaka ny fonja, afaka madiodio
Nivoaka ny fonja omaly zoma 22 septambra rehefa avy namita sazy nandritra ny herintaona mahery teny amin’ny fonjaben’Antanimora ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Orange Madagascar Namaly soa ireo ankizy nahay nikirakira solosaina
Ankizy sy tanora miisa valo, mendrina indrindra nandray anjara tamin’ilay vakansy nomerika nokarakarain’ny Ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny orinasam-pifandraisana Orange Madagascar omaly no notolorana loka, ankizy tafiditra tao anatin’ilay fifaninana top 10 “Bots for messenger Challenge”.
Porofoy fa tsy ambadika !
Olana novolena sa noriritin’ireo na ilay lohandohan’ny mpisorona mitarika ny tolon’ireo apahana mpitatitra am-piarakaretsaka eto an-drenivohitra ity fifanolanan’izy ireo amin’ny fiadidiana ny kaominina noho ny fanapahan-kevitra handraisan’ny Omavet an-tanana ny fitsirihana ny fiara ity ?
Mpanondram-bokatra Malagasy Sahirana amin’ny tanjaky ny «Ariary»
Teboka iray nomarihan’ny Tahirimbola iraisampirenena tao anatin’ny tatitra nataony mikasika ny tomban’ezaka fizahana nataony teto Madagasikara nandritra ny roa herinandro ny tanjaky ny vola Malagasy.
BICI - IT University Efa fanta-daza eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Sekoly iray manofana momba ny teknolojia avo lenta eto amintsika ny IT University eny Andoharanofotsy.
Fametrahana tsangambaton’ny firaisankina Saika nisy olana teny Analakely
Saika nanondrana indray omaly ny mpitandro ny filaminana tamin’ny fametrahana ny tsangambaton’ny Firaisan-kina notanterahin’ireo olobe avy amin’ny foko 18 mpikambana ao amin’ny Komity
Fanafihana teny Avarabohitra Tratra teny amin’ny “digue” ireo andian-jiolahy
Horonantsary hafa indray no tazana teny amin’ny “route digue” omaly zoma. Tranga mampiseho hatrany ny firongatry ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Dahalo miendrika lolo Lasa saina ny mponina
Faritra mena amin’ny asan-dahalo ao andrefan’i Betafo, kaominin’Ambohimanambola, izay sady misy toeram-pitrandrahana volamena.
TOP INTERNATIONAL MODEL
Tovolahy iray antsoina hoe Dicaprio Groubel no hitondra ny anaran' i Madagasikara amin'ny fifaninana mpilatro izay antsoina hoe "Top International Model of the World" izay atao any Bulgarie ny 20 ka hatramin’ny 27 Septambra ho avy izao.